Le nkonzo online free. Ukubalwa imijelo okanye imijelo
Kubalwe umthamo ayesemseleni
Ubude umsele L
Ukubalwa imijelo okanye imijelo
L - ubude iyonke inches okanye zigingqi
A - ububanzi emantla
B - ububanzi ezantsi
H - ubunzulu umsele
Le nkqubo iqwalasela umthamo kunye komhlaba kwindawo ayesemseleni.
Ukuba ububanzi phezulu nasezantsi ayesemseleni zahlukile, ivolyum iluncedo ilungiselelwe ngakumbi C kwaye umthamo kumathambeka D.
Kuba ukwakhiwa zonxibelelwano, imibhobho ubushushu, amdaka okanye kufakwa ngumcu isiseko kwingingqi yakho kusenokufuneka ukuba embe umsele. Unako kumema iingcali ukuyenza, kodwa ungenza umsebenzi ngokwakho. Kodwa enyanisweni, kwezi meko zombini kuya kufuneka wazi ezinye iimpawu ayesemseleni. Fumana kubo uya kukunceda inkqubo yethu. Ngokusekelwe ubude, ububanzi nobunzulu lweenqwelo zokulwa, elibekiweyo ummandla wayo umthamo kunye komhlaba. Kwimeko apho ububanzi phezulu nasezantsi ayesemseleni zahlukile, kwaye ziya kuba nomthamo ubalwe kumathambeka luncedo. Kubalwe umthamo ayesemseleni kuya kukunceda kungekuphela nje ukwenza lula umsebenzi wabo, kodwa kwakhona ukubala iindleko imisebenzi zomhlaba, ukuba ucinga ukuba usebenzise iinkonzo ziingcali.
Kukho iindlela ezintathu begrumba imingxuma. Le begrumba imingxuma ngesandla, ngesandla okanye trencher trencher.
Kwimeko yokuqala ngokuqhelekileyo ababebuthelene khona, apho kungekho ukufikelela izixhobo ezikhethekileyo. Le ndlela noko ixesha elininzi ye trenching, leyo ichaphazela kakhulu umgangatho womhlaba.
trenchers isandla sicuthe ixesha imisebenzi enjalo. Oku zingathengwa okanye eziqeshiweyo. Unga kwakhona umyalelo ndisomba imijelo kwi ngokuqinileyo ezikhethekileyo. Ke ezisebenza yobungcali.
Le ntshukumo lisetyenziswa apho site ukuqhuba izixhobo zokwakha, kwakunye nalapho kukho isixa esikhulu umsebenzi. Phambi irente ube backhoe kufuneka ufumanise ububanzi ezantsi umsele ukuchola imoto kunye ubungakanani emele olungqamana kuyo.
Ukuba ugqiba ukuba ukwemba umsele ngokwakho, okokuqala kufuneka uyazi ukuba uthabatha kubunzulu ezithile umsele eentlobo ezahlukeneyo umsebenzi. Ngoko ke, umzekelo, kwi iyabala iintambo, ngokuqhelekileyo kusembiwa nobunzulu umsele nama-70 cm. Yaye amdaka kufuna umsele enzulu. Ngako oko siyathanda ukuba wawusele kubunzulu semitha ngaphezu ubunzulu ebandayo bomhlaba.
Ngomhla Ububanzi nomsele kuchaphazela uhlobo umsebenzi owenziwayo. Ububanzi Ubuncinane ayesemseleni ilinganiswa ecaleni ezantsi kwaye kufuneka utshatise uhlobo nobungakanani imibhobho zifunjwe kuwo.